Maalinta: Ogast 24, 2019
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa, mashruuca ugu weyn ee gaadiidka dadweynaha ee magaalada Bursaray'da waxay dardar galisay shaqada waxay kordhineysaa awooda 60 boqolkiiba. Nidaamka cusub ee calaamadaynta, waqtiyada sugitaanka ayaa la yareyn doonaa daqiiqadaha 2. [More ...]
İZBAN, Haddii aad dooratay magaca in ilaha qaar ka mid ah, waa nidaam saddexaad ee ugu weyn ee magaalada rail Turkey ee in adeegyada ee Izmir. Mashruucan waxaa lagu fuliyay iyada oo lala kaashanayo Degmooyinka Magaalada Izmir iyo TCDD. 136 inta u dhaxaysa degmooyinka Aliağa iyo Selçuk [More ...]
Wadada-xawaaraha-dheer ee Ankara-Istanbul waa wado tareen xawaare sare leh oo u dhaxaysa Ankara iyo Istanbul, taasoo qayb ahaan la furay oo u adeegta hay’adda 'NYT'. Markii waxwalba dhammaadaan, dhererka 533 km wuxuu safka u jiri doonaa safarka loogu tala galay 3 [More ...]
Waaxda Gaadiidka iyo Waaxda Maareynta Gaadiidka ee Adeegyada Saldhigga Basaska ee Kocaeli Magaalaweynta Kocaeli iyada oo loo marayo dayactirka joogtada ah iyo nadiifinta xirmooyinka xiran dhammaan Kocaeli waxaa la sameeyaa iyada oo aan kala go ’lahayn. Nadiifinta 3.224 JOOJINTA IYO MAAMULKA Kocaeli [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso mashruuca "Iskuxirka Eynerce Junction - Yavuz Sultan Selim Street Connection Road" si loo fududeeyo albaabka laga galo xarunta degmada Dilovas by ee Bari. Yavuz wuxuu ka yimid Isgoyska Eynerce [More ...]
Darawalada aan naafada ahayn waxay dagan yihiin meelaha gawaarida la dhigto ee loo qoondeeyay muwaadiniinta naafada ah waxayna la wareegaan xuquuqda la siinayo dadka naafada ah. Sarkaalka Taraafikada ee Magaalada Kocaeli, gawaarida ay leeyihiin meelaha baabuurta la dhigto ee naafada ah meelaha baabuurta la dhigto ee magaalada oo dhan [More ...]
Furitaanka Saldhigga Tareenka ee Konya YHT wuxuu dhammaanayaa Sannadka dhammaadkiisa
Magaalada Konya, Dhismaha Xawaaraha Xawaaraha Sare (YHT) Dhismaha Saldhigga ayaa la qorsheynayaa in la dhammeeyo dhamaadka sanadka lagu dhawaaqay in aan la siinin taariikhda furitaanka. 2016, 68 waxaa laga xayiray milyan ginni, waxaana la rajaynayaa in lagu meeleeyo adeegga rubuc ugu hore ee 2018. [More ...]
Boqortooyada Ingiriiska waxay noqotay tii ugu horreysay adduunka waxayna furtay waddada tareenka, oo tamarteedu ka hesho qorraxda. Haddii mashruucu guuleysto, waddanku wuxuu ku shaqeyn karaa shabakadda tareenka oo dhan tamarta qorraxda. Qorrax u soo baxday raadinta tamar kale [More ...]
Shirkadda Kamil Koç Bus oo loo iibiyay Jarmalka
Rakaabka weyn ee Turkishka Kamil Koç, oo sanado u shaqeynayay 93, waxaa iibsan doona German Flixmobiliy. Go'aanka ah in la iibiyo ka dib musiibada ka dhacday Balikesir ayaa soo jiidatay indhaha. Rafaa gaadiidka Jarmal Turkish iibiyey 93 sano ee Turkey [More ...]
Rakaabka Stations iyo BAŞKENTRAY BAŞKENTRAY BAŞKENTRAY System Map: BAŞKENTRAY waa nidaamka tareenka rakaabka ah oo u adeegta caasimadda ah ee Turkey ee Ankara. Labaatan iyo labaatanka kiiloomitir ee 36 ee u dhexeeya Sincan iyo degmada Kaakş ee Mamak [More ...]